Isikhokelo sokuqala sokubuya kwendlu ekhaya ekuzingeleni indlu - I-Real Estate Blog - i-RealtyWW:
EyoKwindla 27, 2017 by I-Chie Suareztac, Iimbono zizonke:
Nje ukuba uvunyelwe ukuba ubambise ngento yakho, uyazi ukuba uya kuqalisa ukuzingela izindlu kwangoko. Kwaye nje ukuba wenze, zonga ixesha kunye nengxaki yokukhangela okoyikisayo ngokufumana iarhente.
Khawufane ucinge xa ​​ukwimeko yokuthenga ipropathi kwaye udibana nezinto ezincinci kwindlela ngaphandle kwengummeli, yintoni intshukumo yakho kwaye wazi kangakanani malunga nomcimbi kunye nendlela yokuwulungisa? I-arhente kusenokwenzeka ukuba bazibonele ezi meko kwaye benolwazi olungaphezulu kunawe malunga noko, baya kukucebisa ngokwenzekayo kwaye baya kukucebisa ngento omele uyenze.
Uninzi lwabantu lucinga ukuba ukufumana iarhente kuxabisa i-dent kwi-wallet yakho. Inyani yile, ezi arhente zithunyelwa ngabathengisi kanye xa ikhaya lithengisiwe. Akukho sidingo sakuba nexhala malunga nokuhlawula umntu wakube uqaphela oku.
Akukho sidingo sokungxama izinto ingakumbi ukuba unomntwana osendleleni. Njengoko uyazi, uxinzelelo lwengcinga lodwa lunokutyeshela zonke ezinye izinto ekufuneka uziqwalasele xa ufumana ikhaya elifanelekileyo losapho.
Thatha lonke ixesha olifunayo, hayi lonke ixesha olifunayo Ndicinga Nantsi lapho. Ukuthenga ikhaya asinto yokuhamba nje ezivenkileni. Ingaphezulu kokuba likhaya nje — lutyalo-mali. Thatha ixesha ujonge indawo yokuhlala, ujonge kwiindawo ezahlukeneyo, ufumane uluvo lwesibini okanye lwesithathu, ufunde ngokuprinta, kunye nokunye okunje. ukuba ucinga ukuba ulwenzile uluhlu lwakho lokutshekisha kwaye ukulungele ukuyithenga, ke lixesha lokutsala.
Ngaphambi kokuba uqale ukuzingela indlu, fumana kuqala uhlahlo-lwabiwo mali lwakho kwaye ungasondelani kakhulu nekhaya lakho lamaphupha. Ukuba uhlahlo-lwabiwo mali lwakho luyavumela, zive ukhululekile ukwenza iphupha libe yinyani. Njengomgaqo ongenakugxininisa ingqondo: yiba nolindelweyo ngolindelo lwakho nohlahlo-lwabiwo mali.
Inyani yile, ukuba unohlahlo-lwabiwo mali olulinganiselweyo, awunakuhlala ekhaya lakho amaphupha. Ngale nto, kufuneka ulungelelanise kwaye ulinganise umva kancinci. Oko kunokuthetha ukurhweba igumbi lokuhlambela elikhulu igumbi lokulala okanye umgangatho onzima womthi ukuya ekhaphethini. Nokuba zingatshintsha njani na, ayizukuwubeka umlilo umlilo kwindlu yakho. Eli likhaya lakho lokuqala, amathuba okuba ungahlali apha ngonaphakade. Ukuba kungcono imali yakho, logama nje uphile kamnandi, khawukuma.
Yazi indawo engabamelwane
Enye yezimpazamo zixhaphakileyo kubanini bamakhaya okokuqala xa bekhangela ikhaya elinokubakho ukutsiba ukuya kujonga indawo ebumelwaneni. Kubaluleke kakhulu ukuba ungaphoswa leli nyathelo ngenye indlela, lungiselela ukubonelela ubuthongo ebusuku kwindawo enengxolo; okanye ubusuku bugcwele lunkwantyo ngenxa yendawo engakhuselekanga.
Thatha iiyure ezimbalwa okanye usuku lokuhambahamba elumelwaneni kwaye ujonge. Ngaba uzibona uhlala kuluntu? Ngaba uzibona uhambahamba phaya ujonga wena nosapho lwakho ukhula elumelwaneni? Ngaphambi kokuba utshixe izinto ozithengileyo, khangela indawo uqiniseke ukuba yindawo ekhuselekileyo yokuhlala.
Cinga ukwenza uhlolo lwekhaya
Nangona kunjalo uninzi lwamabango kufuneka lubhengeze nayiphi na imicimbi yendlu, kuhlala kukhuselekile ukuqhuba inkonzo yokuhlola ikhaya ukuqinisekisa ukuba indlu ayinangxaki ifihliweyo abathengisi bayizisileyo etafileni. Ukuba uza kuhlala apho ixesha elide, kufanelekile ukuba ihlolwe kwaye umnini wepropathi alungise nayiphi na imicimbi efunyenweyo.
Qaphela zonke iingxoxo kunye nezivumelwano
Funda ngokuprinta uze ubhale ephepheni nayiphi na uthethwano kunye nesivumelwano kunye nomthengisi ekuvunyelwene ngako; Bacele ukuba bayisayine. Ukuba awunayo ephepheni, ngetekhnoloji ayikho.
Zeziphi ezinye iingcebiso kunye nengcebiso ongathanda ukuba wabelane ngayo nabathengi bethu bokuqala ekhaya? Yaba nathi!
Malunga neChie Suarez
U-Chie Suarez ngumbhali / i-blogger ye Amakhaya eWincrest, inkampani eyakha amakhaya eentsapho zaseSydney, e-Central Coast, eNewcastle, nakwiiHunter Regions. I-Chie inomdla onzulu kuyilo lwasekhaya kunye nomhlobiso.
Yenza uphando oluncinci ukuqokelela ulwazi olusisiseko ngokubhekisele kwinkqubo yokuthenga kunye nezinto ukwazi kwangaphambili.
I-Chie Suareztac Matshi 27, 2017
Olu ngeno yafakwa kwi Ukuqhubeka, Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba, Ukuthengisa izindlu nomhlaba noqhotyosho iingcebiso zokuzingela indlu, Ivenkile yentengiso yezindlu, iindlela zentengiso yezindlu, Ipropathi yezezindlu, iingcebiso malunga nomhlaba. Bookmark le Permalink.
Novemba 18, 2017 Uyithengisa njani indlu yakho ngemini enye Ukuthengisa indlu ngumsebenzi odinisayo ngokukodwa ukuba awuyazi into ngalo. Ungafuna ukuthengisa indlu kodwa kusenokwenzeka ukuba uswele inani onalo malunga nentengiso. Ngamanye amaxesha, isidingo sokuthengisa indlu singxamisekile. Oku kwenzeka kakhulu kwezo meko apho abahlali baceba ukufuduka, ngaphandle elizweni okanye isixeko esahlukileyo. Kwiimeko ezinjalo, kuya kufuneka uthengise indlu ngokukhawuleza. Inokuya ngokugqithileyo ukuba [] exhonyiweyo Ukuthengisa izindlu nomhlaba
Julayi 7, 2017 Iindleko zexesha elizayo zeKhaya Ngemarike yezindlu yeyona nto ibilungile kwishumi leminyaka, ngoku lixesha lokuthenga. Nokuba ufuna ukuthenga ikhaya lakho lokuqala, ukhangela ikhaya leholide, okanye ufuna ukwehlisa umhlala phantsi, ukuthenga ikhaya kuhlala kutyalo mali kwikamva. Xa uthenga ikhaya, ihlala ibalulekile kwiitsheki eziphezulu ekhaya. Ngaba uphahla luyavuza? Ngaba ukuntywila kwemibhobho ikwimeko elungileyo? Ngaba isiseko somelele? Yonke imibuzo eyimfuneko yokubuza, kodwa masizibuze malunga […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Novemba 18, 2017 Iingcebiso ezili-9 zokuthenga nokuThengisa ekhaya Ukuthengisa ekhaya kuyeyona ntengiselwano inkulu yezemali kwaye ke kunzima. Kodwa ukungalibali ukuthenga indlu yinto engaphantsi. Apha sikunika iingcebiso ezili-9 onokuzisebenzisa xa kufuneka uthenge kwaye uthengise ngaxeshanye. Thengisa kuqala, emva koko Thenga: Kucetyiswe iingcali ukuba zithengise indlu yakho kuqala emva koko ukhangele entsha. Oku kube luncedo ngenxa yesizathu esithathu. Okokuqala kukuba uza kwazi ukuba yimalini onayo onokuyisebenzisa ekufumaneni […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Februwari 7, 2017 Izindlu zaseLondon kunye neMfuno yePropathi. Amanani, izimvo kunye neendlela zokuziphatha Abaqeshi okanye abaninimzi? Ngaphezulu kwe-30% yabo bonke abahlala eLondon kwaye bengengobanini bamakhaya, kubonakala ngathi bayayamkela le nyaniso, ukuba ukuthenga ngokwakho umzi / impahla eLondon yindlela yokugcwala enezinto ezinzima kunye nezithintelo. Ngokophando oluzimeleyo, ngenxa yokukhula okwandayo kwabemi baseLondon, imfuno ngaphakathi kwintengiso yezindlu ibonakala ibekwe kwindlela eqinisekileyo yokukhula. Amathemba kunye nobudala. Ngaba abantu bayanikezela, okanye ngaba abantu bayazilungisa? Nantsi into endiyi […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
Septemba 22, 2016 Intengiso yeNtengiso yeNtengiso yeNdawo yokufumana iMeko eNtsha Xa urhwebo luqala ngoLwesine, ukuthengiswa kwezindlu kunye nomhlaba kuya kubaluleka ngakumbi kwintengiso. Ukuthengiswa kwezindlu nomhlaba kuya kunikwa iklasi ngokwendlela ye-MSCI kunye ne-S&P Dow Jones Indices, kwaye iya kuba nokuzimela kwezinye iindidi kwicandelo lezezimali. Oku kwahlula kubangelwa yinto yokuba urhwebo lwepropathi njengecandelo lenzile kakuhle, lungcono kune-S&P 500 enyanisweni. Isalathiso semveliso ye-S & P's REIT inyuke ngeepesenti ezingama-24 minyaka le [] exhonyiweyo Imali yezezindlu